Posted on Dai 15, 2014 November 20, 2020 by csr 1687
Sangano reFederal Communications Commission nemusi weChina rakavhota vachitsigira kufambiswa kwesarudzo inogona kugadzirisa zvakare nzira iyo vatengi vanoona nayo Internet, ichivhura mukana webasa reInternet. vashandi kuchaja mawebhusaiti kukwidza-unhu kuendesa kwavo zvemukati kune vatengi veAmerica.
Zano, rakabvumidzwa muvatatu-kusvika-vaviri vhoti pamwe nemabato, zvinogona kuburitsa a itsva hupfumi paWebhu uko Internet service Provider senge Verizon yaizochaja Webhusaiti senge Netflix yekukurumidza vhidhiyo kutenderera. Chirongwa ichi chaizorambidza makambani eterevhizheni kubva achivhara maWebhu chaiwo.
Urongwa hausi wekupedzisira mutemo, asi vhoti nemusi weChina idanho rakakosha kumberi pane a pfungwa inopokana iyo yakakoka kushorwa kunotyisa kubva kuvatsigiri vevatengi, Silicon Valley zvinorema, uye vatongi veDemocratic. FCC ikozvino ichavhura chikumbiro kune mazuva zana nemakumi maviri ekutaura kwevanhu. Mitemo yekupedzisira, yakanangana nekupera kwegore, inogona kunyorwazve mushure mekunge agency yaongorora zvataurwa neruzhinji.
Vatsoropodzi vechirongwa, sezvazviri ikozvino, vanonetseka kuti chingaratidza kupera kwekusarerekera kwemambure, chirevo icho chinotaura kuti zvese zvirimo online zvinofanirwa kurapwa zvakaenzana neveInternet service providers.
[btn link = "http://www.washingtonpost.com/blogs/the-switch/wp/2014/05/15/fcc-approves-plan-to-allow-for-paid-priority-on-internet/" color = "grey" target = "_ blank"] Verenga Yakazara Yekutanga Chinyorwa [/ btn]